shaqaalaha safka hore
ISKU DIIWAANGALINTA MAGACAAGA FARIIMAHAAGA
Maxay Deganeyaashu yiraahdaan
Tahir wuxuu leeyahay xirfado isgaadhsiin oo heer sare ah sidaas darteedna waxaan ku hawlanaa wadahadal dhammaystiran, oo hufan oo waxtar leh isaga laga bilaabo bilowgii wicitaankeenna 10kii Juun. Isagu aad buu u naxariis badanaa wadahadalkeenna wuxuuna maalinba maalinta xigta si naxariis leh u raacay si aan u xidhno wax kasta oo dabacsan. Waxaan ku faraxsanahay adeegga wanaagsan ee la ii fidiyay.
"Dhakhtarka cagaaran ee soo booqday aabbahay wuxuu ahaa mid hufan, deg deg ah, saaxiibtinimo leh oo aad waxtar u leh. Aabahay wuxuu aad ugu qancay joogitaankooda."
Gabadh degane Westminster ah
Dhakhtarka cagaaran wuxuu ahaa caawinaad weyn. Waxaan ku noolahay kaligey waxaanan ubaahanahay inaan xoogaa lacag badbaadiyo hadana waxaan inbadan aad uga fiicanahay biilashayda tamarta. Wuxuu iga caawiyay inaan ku sii socdo U-Switch si aan u beddelo alaab-qeybiyeyaasha, taasoo iga badbaadisay lacag badan. Wuxuu kaloo i tusay sida ugufiican ee aan sifiican ugu isticmaalo kombuyuutarradayda 'combi-boiler', oo aanan waxba ka aqoon. Wuxuu ii qabtay naxariis weyn, waxaan u arkay run ahaantii mid faa iido leh.
Waxaan suulashaga ku bixin doonaa qorshaha iyo adeegga aan helay. Waa wax lagu raaxeysto waqti aad u walaac badan. Talada aan kahelay aad bay ii caawisay.